သင့်အတွက် Healthy Lifestyle Tip များ - Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog
Home » Food » သင့်အတွက် Healthy Lifestyle Tip များ
Min Thuta | Food, Health | March 24, 2019
ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်… 1. အာဟာရမျှတစေရန်အချိုးကျစားပါ ကောင်းမွန်တဲ့ကျန်းမာရေးရရန်အတွက် အာဟာရဓာတ်ပေါင်း ၄၀ ထက်ပိုပြီးလိုအပ်ပါတယ် အစာအမျိုးစားတမျိုးထဲစားရုံနဲ့ မရနိုင်ပါဘူး မည်သည့်အစားအစာကိုမဆိုအာဟာရမျှတအောင်စားဖို့လိုပါတယ် ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် အဆီဓာတ်များတဲ့အစားအစာကိုနေ့လည်စာအနေနဲ့စားထားလျင်ညစာကိုအဆီဓာတ်နည်းတဲ့အစားမျိုးရွေးချယ်သင့်ပါတယ် ညစာကိုများများစားထားလျင် နောက်တနေ့မှာငါးစတဲ့အဆီနည်းတဲ့အစာမျိုးစားသင့်ပါတယ်။
5. ရေများများသောက်ပါ လူတယောက်ဟာအနည်းဆုံး ရေ 1.5 လီတာတော့သောက်သုံးသင့်ပါတယ် ။ရာသီဥတုပူပြင်းတဲ့အချိန်ဆိုပိုမိုလိုအပ်ပါတယ။ချွေးထွက်များတဲ့သူတွေအတွက်လဲ ရေများများသောက်ပေးသင့်ပါတယ်။ရေကတော့အခြေခံလိုအပ်တဲ့အရည်ပါ။အခြား အသီးဖျော်ရည် နို့အခြားအရည်အမျိုးမျိုးကိုလဲသူ့အချိန်နဲ့သူသောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ အထက်ပါနည်းလမ်းတွေဟာအပြောလွယ်ပေမဲ့ နေ့စဉ်လိုက်နာပြီးစားသုံးဖို့တော့ခက်ခဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့ တဖြည်းဖြည်းအကျင့်ယူနေထိုင်စားသောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျန်းမာလှပတဲ့ဘဝလေးရမှာအမှန်ပဲနော်။ Ref-lifestyletips
ဆိုင်အရသာ ကြက်သားသုတ် လုပ်စားကြမယ်
by Min Thuta on June 15, 2019 -0Comments
ကဲအခုလို မိုးရာသီမှာ သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး တခုခုလုပ်စားဖို့ စဉ်းစားရခက်နေပြီလား? ဒါဆိုရင်တော့ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်လေးနဲ့ အရသာပြီးပြည့်စုံတဲ့ ကြက်သားသုပ်လေး လုပ်စားန...